Xiriirka Kubbada-cagta Soomaaliya Oo Shaqada Ka Ceyrisay Tababarihii Xulka Ee Reer Morocco – Garsoore Sports
Xiriirka Kubbada-cagta Soomaaliya…
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda-cagta, ayaa shaqada ka ceyriyay macalinka dhowaan loo magacaabay inuu hoggaamiyo xulka kubadda-cagta soomaalliya macalin Abdellatif Salef, oo ah muwaadin u dhashay dalka Biljim asal ahaanna kasoo jeeda Morocco.
War qoraal ah oo kasoo baxay Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda-cagta, laguna shaaciyay websiteka Somali Football Federation, ayaa lagu cadddeyay shaqa ka ceyrinta macalin Abdellatif Salef.
Bayaanka ayaa u qornaa ”Maanta oo ay taariikhdu tahay 15, June, 2021, waxaa shaqada macalinimo laga ceyriyay Abdellatif Salef, oo ah muwaadin u dhashay Belgium asal ahaanna ka soo jeeda Morocco, kaas oo maamulayay xulka qaranka somaaliya wax ka yar seddex isbuuc markii loo magacaabay xilka tababaranimo ee Ocean Stars.
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda-cagta waxa ay ku sheegeen bayaanka ay soo saareen in “tababaraha uusan laheyn xirfad dhanka macalinimo uu ku leyliyo xulka qaranka Soomaaliya mana lahan Dabeecad wanaag”
“Cayaartoyda kuma qanacsana tababarkiisa, maadaama xirfadiisa iyo khibradiisa aysan aheyn mid uu ku leylin karo xulka qaranka, xitaa ma uusan la iman qorshe tababar ”ayaa lagu yiri warbixinta iyadoo intaa lagu daray in tababaraha uu ku guuldarreystay inuu la shaqeeyo kooxdiisa farsamada.
Ceyrinta tababaraha ayaa timid dhowr saacadood kahor inta aysan Soomaaliya la ciyaarin xulka Jabuuti ciyaar saaxiibtinimo fiidnimadii xalay oo talaado aheyd.
Si kastaba, Abdellatif Salef, waxaa loo magacaabay tababaraha Xulka Qaranka Soomaaliya wax ka yar seddex isbuuc kahor waxaana shaqada laga ceyriyay xalay oo ahayd Talaado kaddib markii lagu dhawaaqay.
Wembley Oo Halis Ugu Jira Inuu Seego Martigelinta Fiinaalka Euro 2020